हाम्रो समर्थन ओलीका लागि होइन भोलिका लागि भन्दै मार्तडीमा प्रर्दशन - Muldhar Post
मूलधारपोष्ट २०७७, २४ असार बुधबार
बाजुरा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थक युवाहरुले मार्तडीमा जुलुस सहीत प्रर्दशन गरेका छन् । ओलीका लागि होइन भोलिका लागि भन्दै बाजुरा जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीमा बृहत प्रर्दशन गरेका हुन् ।
ओलीका फोटाहरु सहीत पेलेकार्ड बोकेर युवा विद्यार्थीले राष्ट्रिय झण्डा सहीत ओली सरकार र ओलीको नेतृत्वको समर्थनमा प्रर्दशन गरेको अनेरास्ववियु बाजुराका संयोजक राजीव रोकायाले बताएका छन् ।
मार्तडी स्थित कर्मचारी मिलन केन्द्र, खेलकुद कार्यालयबाट सुरु गरिएको प्रर्दशन, न्यूरोड हुदै, दुनीहाटबजार, गैरीबजार, बीच बजार, प्रशासन कार्यालय, वन कार्यालय क्षेत्रको परिक्रमापछि लोकतान्त्रीक चोकमा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो ।
ओलीको नामको जनमतलाई अपमान गर्न अपवित्र गठबन्ध गरिएको प्रति आक्रोश सहीत सरकार र पार्टी दुबै ठाउँमा केपीकै निरन्तरताको माग युवाहरुले गरेका छन् । युगका लागि र समृद्ध नेपाली, स्वाभिमानी नेपालीका लागि ओलीको नेतृत्व नेपाली जनताको चाहना भएकोले भारतीय डिजाइनबाट गरिएको खेलको अन्त्य गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
पार्टी महाधिवेशन नभएसम्म पार्टी अध्यक्ष र अर्को निर्वाचन नभएसम्म ओली नै निर्विकल्प हुनुको अर्को कुनै विकल्प नेपाली जनताका लागि स्वीकार्य नहुने अनेरास्ववियुका नेता एवंं बाजुरा क्याम्पसका सभापति चेतनदीप अयडीले बताएका छन् ।
कोण सभालाई संवोधन गर्दै अयडीले ओलीको विकल्प पार्टी विभाजनको संकेत र राष्ट्रहित विपरितको षड्यन्त्र भएको बताएका छन् । बजार परिक्रमपछि जुलुस लोकतान्त्रीक चोकमा आएर कोण सभामा परिणत भएको थियो ।
मेडिकल क्षेत्रका विद्यार्थी प्रेम नेपालीले सञ्चालन गरेको कोण सभामा युवा नेता एवं नेकपा बुढीगंगा नगर कमिटी अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले जनमतको कदर गर्न र देशको समृद्धी, अनि राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि ओलीको निरन्तरता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
विना कारण, इतिहासकै सफल र राम्रा काम हुँदाहुँदै ओलीको विकल्प खोजिनु र काम गर्न नदिएर चौतर्फी घेराबन्दी गरिएको प्रति थापाले आपत्ती जनाएका छन् । पार्टी एकताको मर्मत र भावनालाई संवोधन गर्न र नेपाली जनताको मागलाई सुनुवाइ गर्न ओलीकै नेतृत्वमा सरकार र पार्टी सञ्चालन गरिनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
कोण सभामा नेकपाका युवा नेता दीलबहादुर कुँवरले ओली आफैमा इतिहास र नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र भएकोले यसमा कुनै षड्यन्त्र स्वीकार्न नसकिने बताएका छन् । ओली माथिको आक्रमण सिंगो सार्वभौमत्ता सम्पन्न देश माथिको आक्रमण भएकोले सिंगो देशले प्रतिवाद गर्ने बेला आएको बताएका छन् ।
ओलीका पक्षमा बोल्नेहरु सबै नेकपाका भोटर र ओलीका भक्त होइनन्, ओलीको अडान, नेतृत्व, इतिहासिक काम प्रतिको सम्मान व्यक्त गर्न सडकमा नारा लागेको कुँवरको दाबी छ ।
भारतीय दलाल र भारतीय दानापानीले राजनीति टिकेकाहरुको भविष्य नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनमा निर्धारण हुने भएकोले अन्त्य धेरै टाढा नभएको बताएका छन् । कार्यक्रमको बीचमा सागर नेपालीले ओलीको पक्षमा गीत गाएका थिए ।
आम नागरिक सहीत विद्यार्थीहरुको उपस्थितिमा भएको नारा जुलुसमा आजलाई होइन भोलिलाई, पाँच वर्ष ओलीलाई, जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दावाद, भारतीय हस्ताक्षप मुर्दावाद पार्टी एकता कायम गर, सरकार फेर्न पाइदैन जस्ता नारा जुलुस प्रर्दशन गरिएका थिए ।
जुलुसमा ३ सय बढी युवाहरुको सहभागिता रहेको संगीत शिक्षक राजेश पायलले बताएका छन् । विद्यार्थी, शिक्षक, खेलाडी, व्यापारी, किसान, सर्वसाधारण सहीतले जुलुसमा साथ दिएका थिए । समग्रमा ओलीको विकल्प खोज्न भारत तयार भए, दलालीगर्नेसँग बस्न नसकिने संकेत समेत जनस्तरबाट उठेको छ ।
ओलीको पक्षमा उर्लियो कोल्टीमा जनलहर,
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा बाजुराको कोल्टीमा भव्य प्रर्दशन गरिएको छ । भोलीको सपना बोकेका ओली माथिको प्रहार रोक्न र स्थानीय सरकार ओलीकै नेतृत्वमा सञ्चालन गर्न दिने दबाब स्वरुप युवाहरुले प्रर्दशन गरेका छन् ।
अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य सत्य शाही, विद्यार्थी नेता टेकेन्द्र कठायत, डेनिश शाही र विकास शाही लगायतको अगुवाईमा कोल्टीमा प्रर्दशन गरिएको हो । भारतीय इशाराबाट युग नायक केपी ओली माथि भईरहेको प्रहारका विरुद्धमा जुलुस प्रर्दशन गरिएको अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य सत्य शाहीले बताएका छन् ।
ओलीको नामको जनमतलाई बेवास्ता गरि, पदका भोकाहरुबीचको अपवित्र गठबन्धको अन्त्य गरिनु पर्ने र पार्टी महाधिवेशन नभएसम्म पार्टी अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड दुबैलाई निर्विकल्प स्वीकार्नु पर्ने माग उनीहरुको छ ।
आम नागरिक सहीत विद्यार्थीहरुको उपस्थितिमा भएको नारा जुलुसमा आजलाई होइन भोलिलाई? पाँच वर्ष ओलीलाई, जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दावाद, भारतीय हस्ताक्षप मुर्दावाद पार्टी एकता कायम गर, सरकार फेर्न पाइदैन जस्ता नारा जुलुस प्रर्दशन गरिएका थिए ।
बाजुराको हकमा कोल्टीमा ओलीका पक्षमा पहिलो पटक नारा जुलुस सहीत समर्थनमा प्रर्दशन गरिएको हो । पार्टीकै नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागिरहेका बेला समर्थकले भने पक्षमा प्रदर्शन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको फोटोसहित ‘फेर्नु छ चाँडो देशको मुहार हाम्रो भविष्य हाम्रो सरोकार’, राजीनामा कसका लागि ? नेकपाको स्थायी सरकार जनता चाहन्छन्, जस्ता नारा लगाएका थिए ।
कोल्टीको पुरै बजार परिक्रममा सहीत स्थायी सरकारलाई गिराउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै प्रदर्शनकारीले प्रदर्शन गरेका हुन् । पार्टी विवाद समाधानका लागि अध्यक्षद्धय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिन युवाहरु जुकोट, जगन्नाथ, हिमालीका रुगीन, बाधुँबाट समेत आएर प्रर्दशन गरेका छन् ।